War Saxaafadeed ka soo baxay Guddiga heer Fadaraal ee doorashooyinka dadban – WARSOOR
War Saxaafadeed ka soo baxay Guddiga heer Fadaraal ee doorashooyinka dadban
Muqdisho – (warsoor) – Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) oo gudanaya waajibka loo igmaday ee kormeerka hannaanka doorashooyinka iyo xaqiijinta in doorashooyinka si isku mid ah uga dhacdo dalka, wuxuu safarro xaqiiqa raadin iyo qiimeyn ah ku tagay deegaan doorashooyinka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, iyada oo si la mid ah deg deg loo soo kormeeri doono deegaan doorashooyinka dhimman.
Safarradaan ayaa ujeedadoodu tahay hubinta in doorashooyinku dalka uga dhacaan si isku mid ah; qiimeynta heerka diyaargarowga Guddiyada Dowlad Goboleedyada ee Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GDGHDD) ee dhanka doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka iyo hubinta in GDGHDD waafaqeen, raaceenna hannaanka doorashada ee la isku raacay.
Omar Mohamed Abdulle, the Chairman of the Federal Indirect Electoral Implementation Team, speaks during a press conference held in Mogadishu, Somalia on August 25, 2016. UN Photo / Omar Abdisalan
Guddigu wuxuu sidoo kale kormeerkan ugu kuurgalay waafaqsanaanta go’aanadii Madasha Hogganka Qaran (MHQ) ee lagu hubinayey qoondada haweenka ee xildhibaannada Golaha Shacabka ee 2016ka iyada oo dabagal lagu sameeyey qoraal rasmi ah oo GFHDD horey ugu gudbiyey GDGHDD iyo madaxda Dowlad Goboleedyada 19kii bisha Oktoobar ee 2016ka taas oo ku saabsaneyd asteynta kuraasta deegaan doorashadooda ee ay haween kaliya ku tartamayaan.
Kormeerrada illaa iyo hadda laga fuliyey deegaan doorashooyinka kor ku xusan, wuxuu Guddigu si gaar ah diiradda ugu saaray hubinta daahfurnaanta geedi socodka doorashooyinka, iyada oo tallaabooyin wax ku ool ah laga gaaray dhacdooyin walaac leh sida xadgudubyo loo gaystay musharraxiinta qaarkood. Talaabooyinkii la qaaday waxaa ka mid ah in xil doone weerar gaystay lagu qaadayo tallaabooyin sharciyadeed isla mar ahaantaasna laga xayuubiyey in uu u tartamo xildhibaannimo doorashooyinka 2016ka sida ku cad Xeer Anshaha Musharraxiinta (ee lagala soo bixi karo www.doorashada2016.so).
Guddigu wuxuu caddaynayaa in aysan ka mid ahayn shuruudaha doorashooyinka in musharraxiinta lagu xiro warqado caddayn dambi la’aaneed in ay kala yimaadaan hay’adaha amniga. Guddigu waxuu ugu baaqayaa dhammaan maamul goboleedyada in haddii ay jiraan musharraxiin looga reebay musharraxnimadooda warqadaha caddayn dambi la’aaneed ay la wadaagaan xogtooda GFHDD inta aan la qaban doorashada kursiga musharrraxiisa la hakiyay.
GFHDD wuxuu walaac ka muujinayaa cabashooyinka faragalin ee ka soo yeeraya Oday-Dhaqameedyada 135ta ay saxiixeen MHQ iyo wakiilladooda. Haddaba, GFHDD oo u xilsaaran hubinta iyo la shaqeynta Oday dhaqameedyadaas, wuxu xoogga saari doonaa sidii uu gacan uga geysan lahaa xallinta cabashooyinkaas si loo dadajiyo dhammaystirka liisaska ergooyinka dhiman.
Sidoo kale, Guddigu wuxuu ku wargelinayaa dhammaan hay’adaha garsoorka ee heer federaal iyo dowlad goboleed, in Hannaanka Doorashooyinka 2016ka ee la isku raacay lagu dhisay Guddiyada Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee heer Federaal iyo Dowlad Goboleed oo u xilsaaran hirgelinta, kormeerka iyo fulinta doorashada dadban ee 2016ka. Sidoo kale, dhageysiga dacwadaha iyo xallinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka dadban, waxay MHQ u xilsaartay Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka Dadban. Haddaba, waxaa hay’adaha garsoorka lagu wargelinayaa laguna boorinayaa in ay ogaadaan in guddiyada doorashooyinka dadban loo igmaday dhammaan hannaanka doorashooyinka 2016 ka.
GFHDD wuxuu ka digayaa dhammaan tallaabo walba oo culeys iyo carqaladeyn ku keeni karta ama cagajugleyn loogu geysanayo ergooyinka doorashooyinka, musharraxiinta, oday dhaqameedyada iyo howlwadeennada loo xil saaray hirgelinta iyo xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban 2016ka. Sidoo kale sida ku cad war murtiyeedkii uu GFHDD soo saaray 23/10/2016 ee looga digayay arrimaha dhaawici kara daahfurnaanta doorashooyinka, guddigu wuxuu mar labaad ugu baaqayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ay qusayso doorashadu in laga fogaado isla mar ahaantaasna si wada jir ah looga hortago arrimaha musuqmaasuqa, qof jeclaysiga, iyo faragelinta doorashooyinka.
GFHDD isagoo qaddarinaya marxaladda xasaasiga ah ee fulinta doorashooyinka dadban wuxuu farayaa hay’adaha warbaahinta inay ka fogaadaan tallaabo walba oo carqalad galin karta geedi socodka doorashooyinka 2016ka ama xadgudub ku ah xuquuqda ergooyinka, musharraxiinta iyo howlwadeennada doorashooyinka sida waafaqsan Xeerka Anshaxa ee korjoogayaasha iyo warbaahinta ee Hannaanka Doorashooyinka (ee laga heli karo.
Waxuu Guddigu ka codsanayaa warbaahinta xorta ah inay door wax ku ool ah ka qaataan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo cadaalad ah taas oo shacabka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karo.
Ugu dambeyn Guddigu wuxuu mahadnaq iyo boogaadin u dirayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed, DFS, iyo Dowlad Goboleedyada taageerada ay lagrabtaaganyihiin doorashooyinkan taariikhiga ah ee 2016 ka.
Somali President opens National Air forces station after reconstruction